को गणितज्ञ लागि Bitcoin को मूल्य गणना 2018 - Blockchain समाचार
लागि Bitcoin को मूल्य 2018
जनवरी मा 22, प्रयोगकर्ता मध्यम योएल Lopez Barata प्रकाशित एक पोस्ट: “म सम्पूर्ण वर्षको लागि Bitcoin को मूल्य गणना 2018. तपाईं परिणाम विश्वास छैन! “अस्वीकार संग” यो सिर्फ एक राय छ, छैन लगानीको परिषद. ” Lopez गरेको गणितीय गणना यो प्रणाली आधारित छन् भविष्यमा Bitcoin को व्यवहार विगतमा आफ्नो व्यवहार अनुरूप हुनेछ. यस मामला मा, Lopez Bitcoin ठान्नुहुन्छ “स्वस्थ पैसा”, र फिएट – कुनै: “भविष्यमा लाभ अन्तिम बराबर हुनेछ, जबकि अधिकांश मानिसहरू Bitcoin सबै भन्दा राम्रो पैसा छ भनेर बुझ्न।”
को Lopez सिमुलेशन आधारित छ मोन्टेकार्लो विधि. यो कि बारम्बार अनियमित नमूनाहरू भर गणना एल्गोरिदम को एक विस्तृत श्रृंखला हो. यस मामला मा, Lopez को अनुमानित मूल्य को अन्त द्वारा हुनेछ कुरा बुझ्न Bitcoin देखि दैनिक डलर मुनाफा प्रयोग 2018.
दैनिक लाभ गणना गर्न, उहाँले अन्तिम दिन को लागि मूल्य गरेर हालको Bitcoin मूल्य विभाजन र एकाइ subtracts: “वित्त मा मोन्टेकार्लो सिमुलेशन बारेमा बोल्ने, हामी सम्पत्ति भविष्य मूल्य व्यवहार यसको पछिल्लो व्यवहार समान हुनेछ मान, र यो भविष्य अनियमित संस्करण को धेरै सिर्जना , रूपमा गणित मा जो ज्ञात छ “अनियमित चल्छ”. यस्तो सिमुलेशन बनाउनको लागि पूर्ण कोड उपलब्ध छ GitHub.
अनुकार मा प्रत्येक अनियमित पैदल मोडेल निर्माण गर्न, एक देखि दैनिक लाभ अनियमित नमूनाहरू लिनुपर्छ 2010 आज गर्न, तिनीहरूलाई थप्न र त्यसपछि डिसेम्बर सम्म cumulatively गुणन 31, 2018. तेस पछि, Bitcoin हालको मूल्य अनियमित पैदल को मूल्य ले गुणन छ, र परिणाम भविष्यमा मूल्य एक सिमुलेशन छ. यो गरिन गर्न धेरै पटक आवश्यक (यस मामला मा – 100,000 पटक), र वर्ष को अन्त्यमा हामी प्रत्येक अनियमित पैदल लागि अन्तिम मूल्य वितरण देख्ने.
पहिलो 200 को 100,000 अनियमित चल्छ यो जस्तो:
यो भन्दा अनियमित लागि अन्तिम मूल्य देखि दायरा हिँड्छ कि बाहिर जान्छ $ 10,000 गर्न $ 100,000. निम्न रेखाचित्र लागि अन्तिम मूल्यहरु को वितरण देखाउँछ 100,000 अनियमित चल्छ:
यो सम्भवत मूल्य बीच भिन्न छ भनेर देखाउँछ $ 24,000 र $ 90,000. थप ठीक यसलाई बुझ्न, त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्. पहिलो, तपाईं बस गणना गर्न सक्छन् 50% -अन्तिम मूल्यहरु को वितरण को औं प्रतिशतक. यो बराबर हुनेछ $ 58,843. अर्को विधि आणविक घनत्व अनुमान प्रयोग गरेर सम्भावना घनत्व समारोह गणना र यो कार्य अधिकतम अनुरूप मूल्य पाउन छ – $ 55,530.
तर यो अन्तिम सूचक छैन, यो विश्वास अन्तराल फेला पार्न यसलाई प्रयोग गर्न राम्रो अझै पनि छ. को Bitcoin मूल्य लागि, को 80% विश्वास अन्तराल हुनेछ $ 13,200 – $ 271,277. उहाँले पनि वर्ष को अन्त गरेर संभावना मूल्य तल हुनेछ भन्ने बाहिर पोइन्ट $ 13,200 यो माथि हुनेछ संभावना जस्तै हो $ 271,277.
को आणविक घनत्व अनुमान ज्ञात छ कि अब, यो सम्भावना गणना गर्न सम्भव छ Bitcoin लागत एक निश्चित सूचक गर्न वर्ष नातेदार को अन्त द्वारा पतन हुनेछ भनेर. खासमा, मूल्य जनवरी को स्तरमा कम वा बराबर हुनेछ भन्ने सम्भावना 20 ($ 12,000), छ 9.84%.
अघिल्लो पोस्ट:एक सशस्त्र आक्रमण क्यानाडा गुप्त विनिमय मा प्रतिबद्ध थियो
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 26 जनवरी 2018